တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူ General Wei Fenghe အား ဂုဏ်ပြု ကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
ဇွန် ၁၅၊ ၂၀၁၈ မေ ၃၀၊ ၂၀၂၀
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ၊ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးျဖစ္သူ General Wei Fenghe အား ယေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ေရွ႕၌ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ႀကိဳဆုိသည္။
ဦးစြာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ၊ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးတုိ႔သည္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕၏အေလးျပဳျခင္းကိုခံယူၾကၿပီး ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ကို လုိက္လံၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။ ယင္းေနာက္ အခမ္းအနား တက္ေရာက္လာၾကေသာ ႏွစ္ႏိုင္ငံတပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားအား အျပန္အလွန္မိတ္ဆက္ေပးၾကသည္။
အဆိုပါဂုဏ္ျပဳႀကဳိဆိုပြဲသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္း၊ ၫိႇႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမထြန္းဦး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ၊ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးျဖစ္သူႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Hong Liang ၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္မွ Lieutenant General Peng Bo ႏွင့္တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာတ႐ုတ္ႏုိင္ငံ စစ္သံမွဴးတုိ႔တက္ေရာက္ၾကသည္။
ထုိ႔ေနာက္တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ၊ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးသည္ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ ဧည့္သည္ေတာ္မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၊ အစည္းအေ၀းခန္း၌ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကသည္။
ထုိသို႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ဘက္စုံမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား အဆက္ဆက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ယေန႔ထက္တုိင္ခုိင္ၿမဲသည့္ဆက္ဆံေရးရွိသည္ကုိေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ျပည္သူခ်င္း၊ တပ္မေတာ္ခ်င္း၊ ႏုိင္ငံခ်င္းဆက္ဆံေရးသည္လည္း အၿမဲခုိင္မာလ်က္ရွိသည္ကုိေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ယခုခရီးစဥ္သည္လည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကုိပုိမုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။
ယင္းေနာက္ ဧည့္သည္ေတာ္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ၊ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္ ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးက ယခုကဲ့သုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ လာေရာက္သည့္ခရီးစဥ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်င္းခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၊ ျပည္သူခ်င္းခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကုိေတြ႕ျမင္ရပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္္ႏုိင္ငံဘက္စုံမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိးျမႇင့္၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံအက်ိဳးစီးပြား တုိးတက္ေရးကုိ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကားခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈပုိမုိတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည့့္ အေျခအေနမ်ား၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား လုံၿခဳံမႈရွိေရးႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အေျခအေနမ်ားအေပၚ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈမ်ား၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား မဟာဗ်ဴဟာအက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ေလ့က်င့္ေရးဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးပညာမ်ား အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ေရးႏွင့္အားကစားက႑မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလုံၿခဳံေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္အတြက္ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္မွေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာအျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေဆြးေႏြးၾကသည္။
ေတြ႕ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ၊ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးတုိ႔သည္ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အျပန္အလွန္ေပးအပ္ၾကၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္းဓာတ္ပုံ႐ုိက္ခဲ့ၾကသည္။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူ General Wei Fenghe အား ဂုဏ်ပြုကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၁၅
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူ General Wei Fenghe အား ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိဇေယျာသီရိဗိမာန်ရှေ့၌ ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့်ကြိုဆိုသည်။
ဦးစွာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့သည် ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့၏အလေးပြုခြင်းကိုခံယူကြပြီး ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ကို လိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။ ယင်းနောက် အခမ်းအနား တက်ရောက်လာကြသော နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်အရာရှိကြီးများအား အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ပေးကြသည်။
အဆိုပါဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်နှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang ၊ တရုတ်ပြည်သူ့တပ်မတော်မှ Lieutenant General Peng Bo နှင့်တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံ စစ်သံမှူးတို့တက်ရောက်ကြသည်။
ထို့နောက်တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးသည် ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဧည့်ခန်းမဆောင်၊ အစည်းအဝေးခန်း၌တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံသည် ဘက်စုံမဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက်နိုင်ငံများဖြစ်ပြီး နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ အဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့် ယနေ့ထက်တိုင်ခိုင်မြဲသည့်ဆက်ဆံရေးရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်း၊ ပြည်သူချင်း၊ တပ်မတော်ချင်း၊ နိုင်ငံချင်းဆက်ဆံရေးသည်လည်း အမြဲခိုင်မာလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်း၊ ယခုခရီးစဉ်သည်လည်း နှစ်နိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုပိုမို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေ မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် ဧည့်သည်တော် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် နှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးက ယခုကဲ့သို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် လာရောက်သည့်ခရီးစဉ်ဖြစ်သည့်အတွက် ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံချင်းချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၊ ပြည်သူချင်းချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုတွေ့မြင်ရပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် တရုတ်-မြန်မာ နှစ််နိုင်ငံဘက်စုံမဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်၍ နှစ်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွား တိုးတက်ရေးကို အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လာရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်မည့့် အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ပြည်သူများ လုံခြုံမှုရှိရေးနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အခြေအနေများအပေါ် တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှရပ်တည် ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုများ၊ နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား မဟာဗျူဟာအကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးပညာများ အပြန်အလှန် ဖလှယ်ရေးနှင့်အားကစားကဏ္ဍများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအခြေအနေများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန်အတွက် အစိုးရနှင့် တပ်မတော်မှဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာအမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ကြပြီး တက်ရောက် လာကြသူများနှင့်အတူ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူ General Wei Fenghe အား ဂုဏ်ပြုညစာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ အပိုင်း (၂)
ဇူလိုင် ၂၉၊ ၂၀၂၀ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ(ရုပ်သံသတင်း)